Ra’iisul Wasaaraha Armenia oo laga cabsi qabo in la dilo | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Ra’iisul Wasaaraha Armenia oo laga cabsi qabo in la dilo
Ra’iisul Wasaaraha Armenia oo laga cabsi qabo in la dilo
Dowlada Armenia ayaa ka hortagtay isku day dil oo lala damacsanaa ra’iisul wasaare Nikole Pashinyan sida ay shaacisay hay’ada nabad sugida qaranka ee NSS maalintii sabtida.
Pashinyan ayaa cadaadis kala kulmay kumanaan mudaharaadayaal ah oo mudaharaadayay ilaa Talaadadii kana dalbanayay inuu isku casilo xabad joojinta lagu hubinayo horumarka dhuleed ee Azerbaijan ee Nagorno-Karabakh ka dib lix todobaad oo dagaal ah.
NSS waxay sheegtay in madaxii hore Artur Vanetsyan, madaxii hore ee xisbiga Jamhuuriga garabka baarlamaanka Vahram Baghdasaryan iyo mutadawiciinta dagaalka Ashot Minasyan la xiray.
“Tuhmanayaasha ayaa qorsheynayay in ay si sharci daro ah kula wareegaan xukunka dilka ra’iisul wasaaraha waxaana jiray durbaba musharixiin laga yaabo in laga wada hadlo in lagu bedelo”. Ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay NSS.
Pashinyan wuxuu sheegay horaantii todobaadkan inuusan haysan ikhtiyaar kale oo aan ka aheyn inuu saxiixo heshiiska si looga hortago qasaaro dhuleed oo kale Wuxuu sheegay inuu qaadayo masuuliyad shaqsiyadeed dib u dhacyada, laakiin wuxuu diiday baaqyo ah inuu xilka ka dago.
Xabad joojintu waxay joojisay talaabadii milatari ee ka jirtay Nagorno-Karabakh iyo hareeraheeda, oo ah goob caalami ah oo loo aqoonsan yahay inay ka mid tahay Azerbaijan laakiin ay degan yihiin qowmiyadaha Armenia. Heshiiska ayaa dhigaya in 2,000 oo ciidamo nabad ilaalin ah oo Ruush ah la geeyo gobolka.
Ilaa horaantii 1990-kii, qowmiyadaha Armenia waxay gacanta ku hayeen militariga dhamaan Nagorno-Karabakh iyo dhulal fara badan oo Azeri ku hareeraysan. Waxay hada lumiyeen inta badan dhulkaasi.